सेनाले बनाउँदैछ छाङरु जाने बाटो, भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता हट्ने
काठमाडौँ । भारतको बाटो भएर पुनः नेपाल प्रवेश गर्नु पर्ने छाङरुका बासिन्दाको बाध्यता हटाउनका लागि अहिले नेपाली सेनाले दार्चुलाबाट छाङरुसम्म पुग्ने बाटो बनाइरहेको छ । सेनाले गएको जेठ ८ गतेदेखि दुई..
काठमाडौं। लगानी बोर्डले विभिन्न सात परियोजनाका लागि एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो। लगानी स्वीकृत..
एमसीसी बारे बोल्यो चीन, नेपालले आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै पनि देशसँग सहयोग लिन सक्ने
काठमाडौं । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन-एमसीसीबाट सहयोग लिने विषय नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्ने चीनले प्रष्ट पारेको छ । नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ यान्कीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो आर्थिक..
पेट्रोलियम पाइपलाइनमाथि एक्साभेटर चल्यो, पाइपमा सामान्य क्षति
काठमाडौं । भारतबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइनमाथि डोजर चलेको छ। विरगञ्ज महानगरपालिका वडा १४ मा गण्डक चोक नजिकै वयोधा हस्पिटल अगाडि सडक विस्तारका क्रममा एक्साभेटर चलेको थियो। पाइपलाइनमाथिबाट एक्साभेटर चलेपछि पाइपमा पनि..
चावहिल-साँखु सडक ५० प्रतिशत भाग मात्रै मापदण्डअनुसार
काठमाडौं । चावहिल–साँखु सडकमा झण्डै ५० प्रतिशत भागमा मात्रै मापदण्डअनुसार सडक चौडा हुने र पूर्वाधारको निर्माण हुने भएको छ । उपलब्ध चौडाइमा सडक कालोपत्र गर्ने भनी गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय..
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलादीमा दक्षिण एसियाकै पहिलो नमुना ‘स्काइ वाक टावर’ शनिबार भब्य शिलान्यास गरियो । कुल २ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको हो यो आकास मार्गमा हिँड्न मिल्ने टावरबारे धेरैलाई..
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बारास्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र प्रभु बुढाथोकीले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर..
काठमाडौंका यी क्षेत्रमा आज दिनभर विद्युत नआउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको ११ केभी ओम फिडरबाट वितरित क्षेत्रमा आज दिनभर विद्युत कटौती हुने भएको छ । चक्रपथ विस्तारका लागि नेपाल वन निगमले शुक्रबार रूख कटानको..
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको हो। दुबै जिल्लाको मुआब्जा..
सुन्दर यातायातले १ अर्ब लगानीमा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमै बनाउने
काठमाडौं । सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युतीय सवारी साधन नेपालमै बनाउने भएको छ। सिचुवान गुहाङ अटोमोवाइल्स, बिएके चाइनिज कम्पनीको सहकार्यमा उक्त प्लान्ट बन्ने भएको हो। रूपन्देहीको मोतिपुरमा प्लान्ट निर्माण गर्न लागिएको प्रालिका..
काठमाडौँ। लामो समय सुस्त रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका कामलाई तीव्रता दिन नेपाल भारत सहमत भएका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ काउन्सिलको सातौं बैठकमा..
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको प्रस्ताव: इन्डक्शन चुल्होको कारखाना नेपालमै खोलौँ
काठमाडौं। “सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी सधैँ मागमात्र लिएर आउँछन् र आफ्नो स्वार्थको कुरा मात्रै गर्छन् मैले ठानेको थिए । म यो छलफलमा आउनुअगाडि पनि मेरो त्यही धारणा थियो । तर तपाइँहरु..
काठमाडौं । चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारका रुपमा रहेको कलङ्की–महाराजगञ्ज सडकमा दुई वटा ‘अण्डर पास’, प्रत्येक एक-एक किलोमिटरमा आकाशे पुल र मुख्य लेनमा बीचमा डिभाइर हुने भएको छ । झण्डै आठ किलोमिटर..
सरकारले स्थापना गर्‍यो १० अर्बको कम्पनी, अब देश मै फलाम उत्पादन हुने
काठमाडौं । सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी स्थापना गरेको छ। फलाम उत्खनन कार्यका लागि सो कम्पनी स्थापना गरिएको हो। ४५ प्रतिशत निजि क्षेत्र र ५५ प्रतिशत सरकारको शेयर हुने गरी सरकारले सो..
अव विपी हाइवेमा शुल्क लाग्ने, कुन सवारीसाधनले कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं। धुलिखेल सिन्धुली वर्दिवास सडक (विपी हाईवे)मा यात्रा गर्दा दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। सडक बोर्ड नेपालले असोज १ गतेदेखि सडक उपभोग दस्तुर उठाउन सुरु गरेको हो। सडक दस्तुर उठाउन बोर्डले यस..
अब रेल चढ्ने कुरा चढेपछि नै बताउँला..........
महोत्तरी । “आब रेल चढ पैवाक बात चढब तभीए बतायब” ९अब रेल चढ्ने कुरा चढेपछि नै बताउँला० रेलको कुरा उप्किनासाथ महोत्तरीको भङ्गाहा, लोहारपट्टी र बलवा नगरपालिका क्षेत्रका सर्वसाधारण यसैगरी बनिबनाउ..
एउटै गाउँपालिकामा ५३९ मेगावाटको १२ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुदै
काठमाडौं । म्याग्दीको एउटै गाउँपालिकामा ५३९ मेगावाटको १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका छन् । ‘हाइड्रोहव’ का रूपमा चर्चित उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन, निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका र विद्युत् विभागसँग..
काठमाडौं । आगामी असार १६ गतेदेखि ७० अर्बको लगानी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मेलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन बीच २०७४ भदौमा सम्झौता..
दमकमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ६४ अर्बको लगानी परियोजना स्वीकृत
काठमाडौं । लगानी बोर्डले झापाको दमकमा नेपाल–चीन मैत्रिपूर्ण औद्योगिक पार्क बनाउन ६४ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ । पार्कमा ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी..
जलविद्युत परियोजनाका लागि घट्यो सञ्चय कोषको ब्याज
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले साउन १ देखि लागू हुने गरि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । कोषले जलविद्युत लगानीमा लिँदै आएको ब्याजदर घटाइ नयाँ ब्याजदर कायम गरेको हो। सञ्चय कोषले..
अपर तामाकोशीको साधारण सभा सम्पन्न, संचालनमा आएपछि बार्षिक १० अर्ब आम्दानी गर्ने
काठमाडौं । गत असार ११ गते आवश्यक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित भएको अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा मंगलवार सम्पन्न भएको छ । यस अघि साधारण सभामा उपस्थित सदस्यहरुको..
काठमाडौं । सरकारले इनर्जी बैंकिङको अभ्यास शुरु गरेको छ । पछिल्ला ३ दिनमा २ सय मेगावाट बिजुली भारत पठाइएको उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । ‘पहिलो २ दिन १५०/१५० मेगावाट र..
१५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माणाधीन ह्वासिन सिमेन्टको संरचना बाढीले बगायो
धादिङ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ ताल्तीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग गएरातिको बाढीले बगाएको छ। ताल्तीस्थित खोलालाई नियन्त्रण गरी निर्माण थालिएको सिमेन्ट उद्योग तीन दिनदेखिको वर्षाका कारण खोलामा..
पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई कम्पनी इच्छुक, के चल्ला त पानी जहाज ?
काठमाडौं । नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासंँगै अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन्। नेपाली ध्वजावाहक झण्डा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न..
विश्व कै सबैभन्दा विशाल सोलार फार्म अबुधाबीमा बन्यो
काठमाडौं । अबु धाबीले संसारको सबभन्दा ठूलो सोलार प्लान्ट बनाएको छ । यसबाट ९० हजार मानिसका लागि हरित ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । नूर अबु धाबीमा ३२ लाख सोलार प्यानल छन् ।..
६ अर्ब लगानीमा लमजुङमा स्मार्ट फिल्म सिटी, होटलदेखि केवलकारसम्म बन्ने
काठमाडौं । लमजुङको बेंशीसहर नगरपालिकामा निजी क्षेत्रबाट अत्याधुनिक प्रविधिसहितको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’ निर्माण हुने भएको छ। पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’का लागि बुधबार नेपालको स्काइ इन्टरटेनमेन्ट..
शनिबारदेखि दैलेख र पाल्पा जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम थाल्ने
काठमाडौं । सरकारले आउँदो शनिबारदेखि दैलेख र पाल्पा जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम थाल्ने भएको छ । सो कार्यका लागि चिनियाँ विज्ञहरुको टोली अहिले काठमाडौंमा आइसकेको बताइएको छ । खानी तथा भूगर्भ..
पेट्रोलबाट उठाएको ५ रुपैयाँ खोई ?
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तासँग पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भनेर सांसदहरुले सरकारसित चासो राखेका छन् । मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद तेजुलाल..
पुल शिलान्यास गर्न जाँदा मन्त्रीको गाडी नै चुर्लुम्म डुब्यो
काठमाडौं । पुलको शिलान्यास गर्न अर्जुनचौपारी गाउँपालिका पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ आफैं दरौ खोलामा फसे । अर्जुनचौपारी–३ स्थित शहरे खोलाको पुल शिलान्यास गरेर फर्कने क्रममा वा।..
पहिलो पटक एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालको माथिल्लो त्रिशुली-१ मा लगानी गर्ने
काठमाडौं । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली(१ आयोजनामा एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले पनि लगानी गर्ने भएको छ । चीनको नेतृत्वमा बनेको उक्त बैंकको नेपाली ठूला परियोजनामा यो पहिलो लगानी हुनेछ..
Results 1098: You are at page 1 of 37